Somalia: Wararkii u danbeeyey ee dagaalka Diin Digle deegaanka Galgala - Wargane News
Home Somali News Somalia: Wararkii u danbeeyey ee dagaalka Diin Digle deegaanka Galgala
Waxaa maalintii saddexaad galay dagaalka lagu soo afjarayo malayshiyaad ka tirsan ururka al-Shabaab oo ku sugnaa buuraha Calmadow ee isku xira Gobolada Bari iyo Sanaag.
Dagaalka oo daba socdey kii horey looga saarey al-Shabaab degmada Galgala, waxaana uu ka dhacay buurta weyn ee Diin digle halkaas oo al-Shabaab ay ka dhigteen saldhigoodi u danbeeyey, waxaana dagaalku saakey dib uga bilowdey halka loo yaqaan Dacareeye, waxaana dagaalku aad uga si fogaanayaa Diin Digle oo dhanka Galbeed uga beegan Galgala
Goobaha dagaalku ka dhacaayo ayaa ah kuwo aan waddooyin lahayn dhirtu aad ugu badan tahay isla markaana ay adagtahay in si deg-deg ah loogu kala baxo.
Khasaaraha ka dhashey dagaalkan ayaa wararku sheegayaan in ciidamada difaaca Puntland ay ka dhinteen afar askeri halka dhaawacu uu ku dhaw yahay 10 askeri. Puntland ayaan weli si rasmi ah uga hadlin dagaalkan.
Wararka u danbeeyey ayaa sheegaya in al-Shabaabkii ku harey Diin-digle ay isaga baxeen halkaa inkasta oo aan la xaqiijin halka ay u firxadeen.
Diin digle waa halkii u danbeysey ee sanadkii 2010 Bishii Oktomber Puntland ay ka xoreysey al-Shabaab laakiin muddo kooban kadib waxaa al-Shabaab u suurta gashey in ay dib ugu noqdaan goobihii laga saarey oo dhan oo ay ku jirto Galgala oo Bosaso u jirta wax ka yar 60km.
Somaliland: “Adeer Somalia Walaalo Ma Nihin, Waxbaynu Isku Darsanay Waanaynu Kala Tagnay Dee Nabad-galyo” Faysal Cali Waraabe
Somaliland: Daawo Wariye Ducaale oo Barnaamijkiisa Xusuus reeb ku Wareystay Drs Edna Aden